Blog Post Nhamba 1,000 - Rarama kubva kuTechpoint!
Chishanu, Mbudzi 9, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Ndizvozvo! Blog post nhamba chiuru - rarama kubva kune yegumi yegore Techpoint Summit muIndipolis, IN. Musangano wehunyanzvi muIndiana? Sezvineiwo, ini ndiri mune yakawanda-chiteshi kushambadzira chikamu ndichitaura nezwi, email kushambadzira, uye kubatanidzwa blogging yekushambadzira pamwe nemitemo inobatana neyese. Zvinotoshamisa ndezvekuti, Gavhuna Mitch Daniels vakaseka izvi futi mangwanani ano mushure mekuziviswa kukuru naDavid Baker, CEO weFirst Internet Bank, naRon Brumbarger, CEO we